Dowladda Jabuuti oo beenisay inuu xanuunsan yahay Madaxweyne Geelle – Idil News
Dowladda Jabuuti oo beenisay inuu xanuunsan yahay Madaxweyne Geelle
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Jabuuti Mahamoud Ali Youssouf, oo qoraal ku baahiyay bartiisa twitter-ka ayaa beeniyay wararka sheegaya in xaaladda caafimaad ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay liidato.
Wasiir Mahamoud Youssouf ayaa sheegay in madaxweynaha lagu samaynayo baaritaan caafimaad “sababtuna ay tahay nasasho la’aan maadaama uusan dalka ka bixin xagaagii oo dhan.”
“Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuu fiican yahay. Dhammaan wararka ku saabsan xaaladdiisa caafimaad waa kuwo xaqiiqda ka fog. Madaxweyne Geelle wuxuu shaqadiisa ku soo laabanayaa maalmo gudahood, mana jiro walwal gaar ah oo la qabo” Ayuu yiri wasiirka Warfaafinta Jabuuti.